Osondonzima kwababheke owokucija iPirates - Ilanga News
Home Ezemidlalo Osondonzima kwababheke owokucija iPirates
Abancikene noKhoza bathi kusengenzeka awunike uNcikazi
ZINGENA zingenile izicelo ezivela kubaqeqeshi abehlukene abagaqele umsebenzi wokulolonga i-Orlando Pirates eshiywe isigubhukane nguJosef Zinnbauer waseGermany osule isidumo ngoMsombuluko.
Uveze ukuthi ukhumbule eGermany njengoba eseqhelelane isi-khathi eside nomndeni wakhe ekubeni uhaqwe yizinkinga.
Kuzokhumbuleka ukuthi nendo-dana yakhe ike yaba sengozini ye-moto okuphoqe ukuthi abuyele kwelakubo. Usula nje, leli phepha-ndaba ngawo uMsombuluko libike ukuthi angase axoshwe emuva ko-kuba ingehlanga kahle kubaphathi eyokuwashiswa ijezi yiSwallows FC ngo-2-1 kwi-quarter final yeMTN8 ngoMgqibelo kusihlwa e-Orlando Stadium, eSoweto.
ILANGA lithole ukuthi kunabaqeqeshi abahlonishwayo ikakhulukazi e-Afrika nase-Europe abaga-qele umsebenzi wokulolonga iBu-cs. Phakathi kwabo kukhona uNorman Mapeza waseZimbabwe oke wacija iChippa United, uWedson Nyirenda waseZambia no-Adel Amrouche (osesithombeni) waseBelgium obeqeqesha iqembu lesizwe laseBotswana.
“Negama likaRuud Krol liyavela okuthiwa ufuna ukwengeza ngoBenson Mhlongo ethimbeni labaqe-qeshi uma eshaya ibuya kwiBucs. Kodwa konke kulele kusihlalo weBucs u-Irvin Khoza ngoba udaba olumqoka njengalolu lusingathwa nguyena.
“Njengamanje kubukeka kusazoqhubeka uMandla Ncikazi noFadlu Davids ngoba uKhoza umatasa nezinto zeligi uphuma engena emihlanganweni emqoka. Kodwa angamumemezela noma yinini umqeqeshi, naye uNcikazi usethubeni. Inkinga wukuthi uKhoza ezintweni ezinjena ama-khadi uwadlalela esifubeni kuze kube uqeda konke nomuntu afuna ukumqasha. Ungathola ukuthi kwamanje usenaye umuntu amqa-shile kodwa usazithulele nje.
“Ubevele-ke kodwa engasagculisekile ngoZinnbauer, bekufanele angabuyi njengoba bekusongwe isizini. Ubelokhu ekhale njalo ngokuthi uhola izindodla zemali kodwa kakunasimanga esi-ngako anaso. Ngizwile abanye bebala igama likaSteve Komphela ongu-mqeqeshi omkhulu kwiMamelodi Sundowns.
“Nokho akamuzwa kahle uKhoza kwesokuhola iPirates. Kodwa-ke ngoba yibhola ngeke sazi. Kumele silinde yena uKhoza sizwe ukuthi uzomisa kanjani ngalolu daba,” kusho umthombo waleli phephandaba okuyiwona obulipotshozele ukuthi lo mqeqeshi angase axoshwe.
Imizamo yokuthola uKhoza iphunzile njengoba ucingo lwakhe belukhala kodwa lungabanjwa.
U-Amrouche uthe: “Engingaku-sho wukuthi ngingakuthokozela ukulolonga ikilabhu enkulu kangaka futhi ehlonishwayo e-Afrika.”
UNyirenda ethintwa uthe ngeke akwazi ukuphawula ngalolu daba okwamanje. Uthe konke ukushiyela kubaphathi bakhe okuyi-Prosport International eholwa nguMike Makaab.
Previous articleKubhekwe lukhulu kuGodongwana
Next articleKuhlehlile ukukhishwa kwesigwebo sabasolwa